बेयन्से टेलर स्विफ्ट र अन्य डिभ्यास फेशन अफ द ग्र्यामी अवार्ड्स - PAMPEREDPEOPLENY.COM - फेसन
ग्र्यामी अवार्ड २०२१: बेयोन्सीबाट टेलर स्विफ्ट सम्म, पुरस्कार समारोहमा कसले लगायो?
घर फेसन प्रचलनहरू फेसन ट्रेंड्स देविका त्रिपाठी द्वारा देविका त्रिपाठी | मार्च १,, २०२१ मा
त्यसो भए, rd 63 औं ग्र्यामी पुरस्कार लिइयो र फेसन पूर्ण खिलियो। फेसन पनि छाला र चम्किलो टोनको बारेमा धेरै थियो। फेसन फेदररी टचहरू र रिसक्वे विवरणहरूको बारेमा पनि थियो। बेयोन्सीबाट टेलर स्विफ्ट सम्म, संगीत उद्योगको डिभास ग्र्यामीमा मार्ने लुगा लगाइएको थियो। त्यसो भए, उनीहरूको विस्मयकारी फैशन खेलको बारेमा कुरा गरौं।
Beyoncé कालो पोशाक
बेयोन्सीलाई सर्वश्रेष्ठ आर एन्ड बी प्रदर्शनका साथ सम्मानित गरियो र उनले ग्र्यामी पुरस्कारको इतिहासमा सबैभन्दा बढी सम्मानित महिला कलाकारको रूपमा रेकर्ड बनाई। गाउने अनुभूतिले विशेष रातको लागि कालो-हुड आउटफिटको लागि छनोट गर्‍यो र उनको इम्म्म्बल शियापरेली द्वारा डिजाइन गरिएको थियो। Zerina Akers द्वारा स्टाइल गरिएको, उनले एक कालो पोशाक लगाई जो कि प्लंगिंग नेक्लाइनको साथ पूर्ण-बाहुलाको थियो र लेटेक कपडाबाट बनाइएको थियो। पोशाक रिसर्क थियो र साइड स्लिटहरू द्वारा उच्चारण गरिएको थियो। हामीलाई सुनको नेलको विवरण मनपर्‍यो र उनको मिल्ने कथन ड्याlers्गल कालो र सुनमा शुद्ध वाह थियो। उनले जिम्मी Choo चप्पल संग उनको पहिरो ल्याइन्। श्रृंगार चमकदार नग्न-गुलाबी लिप शेड, कटुरेड गाला, र धुँवाको आँखा छायाको साथ आँखा श्रृंगार द्वारा हाइलाइट गरिएको थियो। मध्य-विभाजित घुमाउरो गोरा ट्रेसले उनको अवतार गोल गर्‍यो।
Dua Lipa सरासर क्रिस्टल पोशाक
दुआ लीपाले बर्षको सर्वश्रेष्ठ पप भोकल एल्बम जितिन् र उनले उनको रिसकुल शियर ड्रेसमा मार्छिन् जुन चियाको कप सबैको थिएन। गायकले कस्टम-निर्मित वर्साचे स्तम्भ पोशाक लगाएको थियो जुन क्रिस्टल जालमा कभर गरिएको थियो। पोशाक विरासत पुतलीको एसेन्ट द्वारा बढाइएको थियो र पेस्टल प्यालेटमा स्वारोभस्की क्रिस्टलले ईन्क्रर्ड गरिएको थियो। गायकको पोशाकमा साइड स्लिट्स थियो, जसले बोल्ड योगफललाई थप्यो। दुआले क्रिस्टल स्टडेड पेन्सिल हिलको साथ उनको पोशाक बनाई, जुन उनको पोशाकसँग राम्रोसँग गयो। उनले गहनाहरू न्यूनतम हेराई राख्दै पूरकको कंगनको साथ आफ्नो हेराइ पहुँच गर्‍यो। मेकअपलाई मौन-गुलाबी लिप शेड, कन्टुरेड गाला, र धुवाँको आँखा छाया द्वारा हाइलाइट गरियो। चिकना मध्य-भागमा लामो लामो t્રેસ उनको लुक पूरा।
आंवला रीठा शिकाईकै पाउडर दहीको साथ
मेगन थे स्ट्यालियनको ओरेन्ज ड्रेस
मेगन थे स्ट्यालियनले शुभ रातको लागि उनको चम्किलो सुन्तलाको पोशाकको साथ पर्याप्त प्रविष्टि बनाई। गायकले सर्वश्रेष्ठ र्याप गीत जित्यो र डोल्से र गब्बाना नम्बर लिइन। उनको सुन्तलाको पोशाक अफ कम्मरको थियो र पछाडि एक आँखा-धनुष धनु चित्रण गरिएको थियो। पोशाक कम्मरमा सिन्च गरिएको थियो र उनले हीराको गहनाका साथ आफ्नो लुक फुकाइदिए जुन जटिल बनाइएको हीरा नेकपीस र पूरक स्टडहरू समावेश गर्दछ। मेकअपलाई हल्का-गुलाबी लिप शेड, कन्टुरेट गालको हड्डीहरू र धुवाँको आँखा छाया द्वारा चिह्नित गरिएको थियो। मध्य-विभाजित पफ्ड बन उनको लुक accentuated।
ईन्ग्रिड एन्ड्रेस 'Jeweled Pantsuit
अमेरिकी गायक इrid्ग्रिड एन्ड्रेसले उनको इम्सेम्बलको साथ प्यान्टसुट फेसन पुनः परिभाषित गर्‍यो जुन त्यस्तो ठाडो तर बोल्ड थियो। उनीले त्यस अवसरको लागि सेतो प्यान्टसुट लगाई जुन सामाजिक दूरी पछ्याउँछिन् र उनको पहिरन जर्जियो अरमानी द्वारा डिजाइन गरिएको थियो। इrid्ग्रिडले पेन्टसिट लगायो जुन एक धारदार सिलाई गरिएको ज्याकेट र मिल्दो प्यान्टको जोडी, दुबै धातुको एक्सेन्ट्स द्वारा उच्चारण गरिएको थियो। यद्यपि यो उनको चोपार्ड लेयर्ड हीरा चोडी हो जसले फेशन बारलाई बिग्रन्छ। उनले सिक्काबाट प्रेरित हिराको झुम्काको साथ आफ्नो हेराई पनि हेरिन। मेकअपलाई गुलाबी ओठको छाया, कन्टुरेट चेकबोनहरू, र सूक्ष्म आईलाइनर द्वारा चिह्नित गरिएको थियो। मध्य-विभाजित तामाको कपडाले उनको अवतार गोल गर्‍यो। इrid्ग्रिड सोनिया य Young्गले स्टाइल गरे।
मिरांडा लेम्बर्टको शिमरी पैटर्न पोशाक
टिफनी गिफर्डको स्टाइलमा मिरन्डा लेम्बर्टले एउटा सिम्मेरी लामो पोशाक लगाएको थियो जुन गेनी भन्ने लेबलबाट आएको थियो। उनको पोशाकमा एउटा कुरकुरा प्लंगि neck नेक्लिन र एक साइड-स्लिट प्रस्तुत गरिएको थियो, जसले बोल्ड क्वाइन्टमा थप गर्‍यो। कपडा चहकिलो कालो टोन एक्सनको साथ खैरो-लुगा थियो र उनले सोफिया वेबस्टरको क्लासिक कालो स्यान्डलको साथ पोशाक जोडी। गायिका, जसले बेस्ट कन्ट्री एल्बमको लागि पुरस्कार जित्यो, क्वाट पन्ना र गोमेद ड्रप ईयररिंग्स, हीरा चूलीहरू, पन्नाको औठी र आर्ट डेको हीरा रिंग लगाउँथि जुन किवाट डायमंड्स एक्स फ्रेड लेइटनबाट आएको थियो। मेकअपलाई गुलाबी ओठको छायाले हाईलाइट गरिएको थियो र बिरालो-आँखा कोहलले उनको हेराईलाई माथि उठाई। पातलो छेउमा-विभाजित गोरा रंगका कपडाले उनको अवतार पूरा गर्‍यो।
मिकी गय्टनको सुन सुन्दर पोशाक
मिकी ग्याटनले ग्रामिज २०२१ मा ब्ल्याक लाइक मी प्रस्तुत गर्‍यो र यो एक विद्युतीकरण प्रदर्शन थियो, जसको लागि एक नईम खान गाउनको विकल्प छन। यो पूर्ण-बाहुला र संरचित सुनौलो पोशाक हो जुन जटिल रूपमा सिक्वेन्ड गरिएको थियो र विशेष मात्रामा ट्रेल थियो। उनले स्टुअर्ट वेट्जम्यानको स्यान्डलको साथ उनको लामो गाउन teamed। टिफनी गिफोर्डले स्टाइल गरेकी उनी डायमंड ब्रेसलेटहरू, चम्किरहेको झुम्का, र ठाडो औंठीलगायत नील लेन द्वारा डिजाइन गरिएको थियो। उनको मेकअपलाई धुवाँको कोल, कटुरेड गालाबोन, र गुलाबी ओठको छायाद्वारा हाइलाइट गरिएको थियो। छेउमा विभाजित छोटो लहराती tresses उनको लुक बाहिर गोल।
डोजा बिरालो बोल्ड फेदर ड्रेस
डोजा बिरालाले सबै लुगा लगाएको थियो र ग्र्यामी अवार्ड्समा उनको रोबर्टो काभल्ली पोशाकको साथ हामीलाई सबैभन्दा आश्चर्यजनक फेसन क्षणहरू दिइयो। उनको पोशाकमा कालो र सेतो पट्टि र एउटा प्लंगिंग नेकलाइन द्वारा उच्चारण गरिएको पूर्ण-आस्तीन चोली फिचर गरिएको थियो। माथिको कम्मरमा सिन्च गरिएको थियो र असममित स्कर्ट हरियो र कालो फेदररी विवरणहरूले बढाएको थियो। उनले एजी इ black्गल कालो हीराको गहना लगाएकी थिइन जसले उनको सेसी लुक बढायो उनको गहना लोरेन स्वार्ट्सबाट आएको हो। मेकअप चमकदार गुलाबी ओठ छाया र धुँवादार आँखा छाया द्वारा हाइलाइट गरिएको थियो। फ्रिंज हेयरडोले उनको लुक समेट्यो।
बिली एलिशको ज्याक्वार्ड पजामा सेट
बिली इलिशले पछिल्लो वर्ष उनको ग्र्यामी पुरस्कारको साथ हेडलाइन्स खिचेकी थिइन। उनले यो वर्षको रेकर्ड अफ द ईयर अवार्ड पनि जितेकी थिइन। उनले यस अवसरको लागि गुची पजामा सेट लगाई, यसलाई अद्वितीय र स्टाइलिश बनाउँदै। गाउने अनुभूतिले फ्लोरल ज्याकवर्ड शर्ट र प्यान्ट लगाएको थियो एम्ब्रोइडर्ड सेक्विन, बकेट टोपी, बेमेल फूलहरू ज्याकवर्ड ग्लोभ्स, र छाला ल्याग एक्ल रबर लोफरहरू सहित हर्सबिट विवरण। बिलीले पनि एक मिल्दो मास्क लगाउँथ्यो र यसले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा मास्कहरूको लागि कडा मामला बनायो। उनले हरियो र आबनूस कपडाको साथ उनको लुकमा छिन।
महा मृत्युंजय मन्त्र जप गर्दा हुने फाइदाहरू
टेलर स्विफ्टको रंगीन पुष्प पोशाक
छ वटा कोटीहरूमा नामित, टेलर स्विफ्टले rdrd औं वार्षिक ग्र्यामी अवार्डमा एल्बम अफ द इयर जित्यो र उनले यस अवसरको लागि भव्य पुष्प पोशाक लगाइन्। उनको पोशाक ऑस्कर डे ला रेन्टा द्वारा डिजाइन गरिएको थियो र उनको पोशाक सुन्तला, गुलाबी, बैजनी, हस्तिहाड, र पहेंलो फ्लोरल एप्लिक विवरण द्वारा उच्चारण गरिएको थियो। यो सरासर टचको साथ पूर्ण आस्तीनको पोशाक थियो र टेलरले उनको लुगा क्रिश्चियन लुउबुटिनको गुलाबी धनुबाट प्रेरित स्यान्डलको साथ बनाई। जोसेफ कासेल स्टालिंग फाल्कनरले ओपल गहना लगाउँथे, जुन क्याथी वाटरम्यानले डिजाइन गरेका थिए। मेकअपलाई गुलाबी ओठको छाया, चमकदार चेकबोनहरू, र गुलाबी आँखा छाया द्वारा चिह्नित गरिएको थियो। छोटो सुनौलो फ्रिंज हेयरडोले उनको हेराई पूरा गर्‍यो।
त्यसोभए, कसको पोशाक र लुक तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्‍यो? हामीलाई थाहा दिनुहोस्।
स्रोत: गेट्टी छविहरू
विश्व सूचीमा सब भन्दा पुरानो भाषा
कसरी थाहा छ यदि केटीले तपाईंलाई गोप्य रूपमा माया गर्छ
कसरी प्राकृतिक छाला प्राप्त गर्ने
छाला गोरो बनाउनको लागि ग्राम आटा फेस प्याक
कपाल स्प्रे को उपयोग के हो?